खराब कर्जा उठाउँदा पनि ग्लोबल आईएमईको नाफा बढ्न सकेन | गृहपृष्ठ
Home लगानी खराब कर्जा उठाउँदा पनि ग्लोबल आईएमईको नाफा बढ्न सकेन
खराब कर्जा उठाउँदा पनि ग्लोबल आईएमईको नाफा बढ्न सकेन
मङ्सिर २, काठमाडौं (अस) । ग्लोबल आइएमई बैङ्क लिमिटेडको चालू आवको पहिलो त्रैमासमा रू.८ करोड १३ लाख खराब कर्जा सङ्कलन गर्दा पनि नाफा भने गत अवाको तुलनामा २७ प्रतिशतले घटेको छ । गत आवमा रू.४२ करोड रहेको नाफा चालू आवमा रू. ३५ करोडमा सिमित भएको छ ।
कम्पनीको खुद व्याज आम्दानी तथा सञ्चालन मुनाफा घट्नाले नाफा घटेको हो । बैङ्कको खुद व्याज आम्दानी गत आवको तुलनामा १५ प्रतिशत घटेर रू. ६९ करोड २७ लाख पुगेको छ भने सञ्चालन मुनाफा २७ प्रतिशत घटेर रू.३८ करोड ९३ लाख पुगेको छ ।
चालू आवको पहिलो त्रैमासमा बैङ्कको चुक्तापूँजी रू.८ अर्ब ८८ करोड पुगेको छ । जगेडा कोषको रकम ४० प्रतिशत बढेर रू.२ अर्ब ७६ करोड, कर्जा तथा सापटी रू.८८ अर्ब र निष्क्रिय कर्जा १ दशमलव ५७ प्रतिशत रहेको छ । बैङ्कको प्रतिशेयर आम्दानी रू. १५ दशमलव ९० रहेको छ ।